Moto Kurwa Zvishandiso & Spare zvikamu Vagadziri uye vanotengesa - China Moto Kurwisa Zvishandiso & Spare zvikamu Fekitori
Ductile simbi yakakomberedzwa pombi fittings uye coupling / joini / kiramba / mechiniki tee / yakamisikidzwa mechnical tee
Zita Rigid uye inoshanduka kubatanidza, gokora, tee, muchinjikwa, yokuderedza, chivharo, michina tee, muchinjikwa muchinjikwa, flange adapteri Standard ANSI, ASTM, ISO Saizi 1/2 ″ -12 ″, DN15-DN500 Material Ductile iron QT450 Pedza Paint, Epoxy kana Galvanization, Dacromet Kubvumidzwa FM / UL / CE Mashandisirwo 1. otomatiki inosasa sisitimu yekudzivirira moto pane vekutengesa, vehurumende uye vemunharaunda zvivakwa senge mvura yekupa, gasi inopa, kupisa kuendesa, etc. 2. Industrial pombi system pane kutumira, yangu ...
Inoshandiswa zvakanyanya mu otomatiki inosasa sisitimu yekudzivirira moto pazvivakwa zvevatengesi, zvevagari pamwe nemaguta. Zvakaita senge, hofisi, chikoro, kicheni uye imba yekuchengetera; Shanda netembiricha inononoka; Vairous mhando kusarudza; Kuisa nyore uye kushandisa. Hunhu neKushanda Model FESFR moto inosasa Musoro Brass, chrome yakanamirwa pamoto Type Yakatwasuka / Pendendi / Yakatsemuka Sidewall Norminal dhayamita (mm) DN15 kana DN20 Inobatanidza shinda R1 / 2 ″ kana R3 / 4 ″ ...